Murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutungamiri wesangano remadzimai ari munyaya dzezvematongerwo enyika reZimbabwe Women in Politics Alliance, Muzvare Lynda Masarira, vatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva pakuratidzira kwakaitika gore rapera.
Dare ramejasitiriti rekuMbare muHarare ratura mutongo wekuti Muzvare Masarira vagare mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekukanganisa kufamba kwevanhu nemotokari kwavanonzi vakakonzeresa pakuratidzira kwakaitwa gore rapera mumusha weMufakose pakaramwa veruzhinji mabasa kwemazuva maviri.
Dare rati pamwedzi gumi nemumwe yasara, Muzvare Masarira vanogona kuipika kana kuti vonoshanda pachena paMarlborough Clinic kubva na8 dzemangwani kusvika 4 dzemasikati kwemasvondo gumi nemaviri.
Muzvare Masarira, avo vasarudza kunoshanda pachena sezvaturwa nedare, vaudza Studio7 kuti vachapikisa kubatwa kwavo nemhosva pamwe nemutongo uyu vachiti paitwa chavati chitororo pakutongwa kwenyaya yavo.
Muzvare Masarira vakasungwa zvichitevera kuratidzira kwakaitika muna Chikunguru gore rapera mushure mekuramwa mabasa kwemazuva maviri kwakakurudzirwa nemasangano akaita se Hashtag ThisFlag pamwe neTajamuka.